Madaxweynaha Puntland oo maareeye cusub u magacaabay garoonka diyaaradaha Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo maareeye cusub u magacaabay garoonka diyaaradaha Boosaaso
January 19, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maareeye cusub u magacaabay garoonka diyaaradaha Boosaaso.
Axmed Siciid Yuusuf ayaa loo magacaabay mareeyaha cusub ee garoonka diyaaradaha Boosaaso, sida lagu sheegay digreeto ka soo baxday madaxtooyada subaxnimadii hore ee Axada.
Lama sheegin sababta ka dambaysa xilka qaadista maareeyihii hore ee garoonka diyaaradaha Boosaaso kaasoo xilka hayay wax ka yar sanad oo uu soo magacaabay madaxweyne Deni.
Garoonka diyaaradaha Boosaaso oo sanadkii 2016 ay dhistay shirkada Shiinaha ee CCECC ayna dhaqaalaha bixisay dowlada Talyaaniga, ayaa bishii September ee sanadkii 2019 Puntland ku wareejisay shirkad Imaaraat ah oo la sheegay in ay casriyayn doonto.
Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa hadda safar ku jooga xarunta ganacsiga Puntland ee Boosaaso.
Dhuusamareeb-(Puntland Mirror) Maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in ay suurtagal ahayn in ay yimaadaan Muqdisho. Bayaan maanta oo Axad ah kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa lagu eedeeyay in madaxtooyada Soomaaliya [...]